Cajiibka: Adeegyada Wareegyada Wareegga Wanaagsan ee Ganacsiga
. Waxay asal ahaan ka timaadaa laba qaybood: Sawirrada wax lagu qoro iyo Sawirlaha Xirfadaha Shaqada. Sawir-baadhaha aasaasiga ah wuxuu ku habboon yahay bilowga iyo shaqaaleeyaha, iyo daabacaadda xirfadeed waxay u fiican tahay ganacsiyada iyo noocyada ugu sarreeya. Xoqitaanka sawiradu wuxuu ka kooban yahay server-ka wakiil oo wax ka qabta codsiyada HTTP iyo HTTPS. Waxaa ku jira mashiinnada qorniishka qoraalka ah waxaana loo isticmaali karaa ColdFusion, PHP, iyo Java. Adeegyada wax lagu qoro ee ugu caansan ee loogu talagalay hoos u dhigista xogta hoos ayey ku xusan yihiin.
Macluumaadka Warshadaynta (Extension Chrome):
Dharbaaxaha xogtu waa barnaamij dhammaystiran oo faa'iido leh. Waxay inta badan ka tirtirtaa macluumaadka liisaska iyo jadwalka waxayna keeneysaa xogta XLS, JSON iyo CSV. Noociisa lacagta ah wuxuu ku haboon yahay ganacsiyada, uma baahnid wax xirfad barnaamij ah si aad uga faa'iidaysato plug-ka. Waa inaad kaliya ku dartaa plugigaan kumbuyuutarkaaga kumbuyuutarka oo aad bilowdid xogta ka soo gasha bogagga internetka ee la rabo.
Waraaqaha Webka (Firefox extension):
Sawir gacmeedku waa u wanaagsan yahay dadka isticmaala Firefox waxayna kuu ogolaaneysaa inaad abuurto bogag. Iyada oo adeeggani, waxaad si sahlan u tarjumi kartaa boggaaga iyo inaad hagaajiso qiimeynta mashiinka raadinta waqti aan waqti lahayn. Kaliya kordhinta dheeraadka ah ee Firefox-kaaga iyo xogta laga soo qaato bogagga internetka si fudud. Waa bilaash oo ku habboon bilowga.
Dareemku waa mid kale oo adeega sawirada oo daabacan xogta laga soo qaaday faylasha PDF, website-yada, blogyo gaar ah, iyo sawirro. Waxay u bedeshaa qaabab la jecelyahay oo aad ku hesho natiijooyin wanaagsan oo nadiif ah. Waa inaad soo bandhigtaa xogta aad rabto inaad soo saarto oo guji "doorinta" doorasho si aad u bilowdo. Dareemka waxaa loo yaqaanaa interface-ku-user-saaxiibtinimo, oo waxaad ku dari kartaa columns cusub isticmaalaya JQuery iyo XPath. Waxa kale oo aad nuqul ama koobi kartaa xogtaada Google Docs iyo XSL si haboon.
Sawir gacmeedka waa sawir kale oo weyn oo la adeegsanayo oo leh dhexdhexaad buuxa oo isku xiran oo loo isticmaalo si loo ururiyo macluumaadka laga helo boggaga internetka. Waxaad si fudud u heli kartaa xogta waqtiga-dhabta ah ee laga helo website-yada la doonayo iyo dhoofinta macluumaadka la soo saaray sida CSV, JSON, faylasha SQL iyo XML. Waxay ku haboon tahay dadka isticmaala Windows waxayna kuu ogolaaneysaa xogta xoqidda ilaa iyo 40,000 bog bog ah maalintii. Sawir sawir leh ayaa si sahlan u ururin kara macluumaadka laga helo filimyada iyo sawirrada iyo sida loo xareeyo shuruudahaaga. Barnaamijkan waxaa lagu heli karaa labada lacag oo bilaash ah iyo lacag bixin ah, waxaana ku habboon shirkadaha iyo ganacsiyada waaweyn.
Dhammaan adeegyadan xoqitaanka waxay kaa helayaan xogta la aqrali karo oo la awoodi karo oo waxay qaban karaan dhowr hawlood oo isku mar ah, iyagoo badbaadinaya waqtigaaga iyo tamartaada Source .